एल्वीरा सस्त्रेका पुस्तकहरू, भावनाका साथ कविता र भावनाको साथ कथा | वर्तमान साहित्य
एल्विरा Sastre पुस्तकहरु
जुआन अर्टिज | | किताबहरु, नोभेला, कविता
यो गत बर्ष, वेबमा "एल्भिरा शास्त्रे लिब्रोस" को खोजीमा वृद्धि भएको छ। र यो कुनै अचम्मको कुरा होइन किनभने यी २ years बर्षे युवती स्पेनी महिला कवि, लेखक, फिलोलॉजिस्ट र अनुवादक हुन्। उनले सफलतापूर्वक कविताहरूको विभिन्न संग्रह प्रकाशित गरे र उनको पहिलो उपन्यास प्रस्तुत गरे पछि २०१ Short छोटो पुस्तकालय पुरस्कारबाट सम्मानित गरियो: तपाई बिना दिनहरू (2019).
Sastre उनको पुस्ता को सबै भन्दा उत्कृष्ट लेखक मानिन्छ, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै। सब भन्दा भर्खरका मान्यताहरु मध्ये, पत्रिका फोर्ब्स (यसको २०१० संस्करणमा) यसलाई "एक सय सबैभन्दा धेरै रचनात्मक", विश्वको सबैभन्दा असाधारण प्रतिभा मात्र विशेषता एक विशेष रोस्टर।
1 एल्वीरा सस्त्रेको जीवनको संक्षिप्त सारांश
1.1 साहित्यिक कार्यहरू
2 एल्विरा Sastre पुस्तकहरु
2.1 तपाईंको कपाल (2012 २०१२) लाई चियाउने Fort-तरिकाहरू
2.2 बुलबार्क (२०१ 2014)
2.3 तपाई बिना दिनहरू (२०१))
2.4 खराब चीजहरू राम्रो कुकुरहरूलाई हुँदैन (२०१ 2019)
एल्वीरा सस्त्रेको जीवनको संक्षिप्त सारांश
१ 1992 XNUMX २ को ग्रीष्म ,तुमा स्पेनी शहर सेगोभियाले एल्भिरा सस्त्र सान्जको जन्म देखी। आफ्नो बुबालाई धन्यबाद, उनको बचपन पुस्तकहरू बीच पार भयो; धेरै युवावस्थादेखि नै उनले पढ्न मन पराउनु भयो। यसको एउटा नमूना यो हो केवल १२ बर्षको उमेरमा उनले आफ्नो पहिलो काव्य रचना लेख्न सके। तीन स्प्रि laterहरू पछि, युवतीले आफ्नो ब्लग सिर्जना गर्‍यो रीलोकस र मेमोरीहरू (अझै सक्रिय)
पहिलो लेख उनको कलम को लागी धन्यवाद प्राप्त भयो इमिलियानो बराल कविता पुरस्कार, जुन उनको छोटो कथाको लागि सम्मानित गरियो मिस. वर्षौंपछि, उनले अंग्रेजी अध्ययनमा विश्वविद्यालयको डिग्री प्राप्त गर्न म्याड्रिडको यात्रा गरे। उनको क्यारियरको समानांतर, कविको रूपमा उनको जीवन स्पेनीको राजधानीमा अझ बढेको छ। यसले उनलाई चिठ्ठीको क्षेत्रमा प्रख्यात व्यक्तित्वको साथ काँधमा मलग्न अनुमति दियो, एक प्लेटफार्म साझा गर्न आउँदै।
२०१ 2013 मा, सस्त्रेले आफ्नो पहिलो काव्य रचना प्रकाशित गरे, जुन उनले कल गरे तपाईंको कपाल ढीला गर्न Fort-वटा तरीका। पुस्तकको प्रस्तावना लेखक बेन्जामिन प्राडोले लेखेका थिए। महिना पछि, भल्पपरासो एडिसियन्स पब्लिशिंग हाउसमा यसको दोस्रो कविता संग्रह सुरू गर्नका लागि आदेश गरिएको थियो, बुलबार्क (2014). यो काम अझै स्पेनमा सबैभन्दा बढी बिक्रि हुने कविता पुस्तकहरूको शीर्ष पदहरूमा रहन्छ, ल्याटिन अमेरिकामा पनि यसको ठूलो स्वीकृति छ।
एल्वीरा सस्त्रेको अर्को पोस्ट थियो कोही पनि नाच्दैनन् (2015), केही नयाँ कविताहरूको समावेश सहित उनका पहिलो दुई पुस्तकहरूको संकलन। त्यस समयमा उनले साहित्यिक अनुवाद (म्याड्रिडको कम्प्लेन्टेन्स युनिभर्सिटी) मा विशेष पाठ्यक्रम समाप्त गरे। एक अनुवादकको रूपमा आफूलाई मजबूत बनाउनको लागि क्षेत्र मा उनको पहिलो ट्रान्सक्रिप्शनहरू बनाउन। मितिमा उसले अनुवाद गरेका केहि पुस्तकहरू हुन्:
बब Dylan बच्चाहरु (गोर्डन ई। म्याकनर)
माया कविताहरु (ऑस्कर वाइल्ड)
एक तर्कसंगत जडान (जोन कोरी व्हेली)
उनका साहित्यिक निर्माण दुई कविता संग्रह संग जारी: शरीरको एकाकीपन घाउमा अभ्यस्त छ (2015) र हाम्रो को कि किनारा (२०१))। थप रूपमा, अखबारमा चकित भए देश, लेखको साप्ताहिक लेखन गर्दै म्याड्रिडले मलाई मार्छ. एल्वीराले उपन्यासकारको रूपमा डेब्यू गरे तपाई बिना दिनहरू (२०१)), प्रकाशन जसले उनलाई प्रतिष्ठित बनायो: छोटो पुस्तकालय पुरस्कार उही वर्ष। अर्को, त्यसले बच्चाहरूमा केन्द्रित आफ्नो नवीनतम किस्त प्रस्तुत गर्‍यो: खराब कुकुरहरू राम्रो कुकुरहरूमा हुँदैनन् (2019)।
तपाईंको कपाल ढीला गर्न Fort-वटा तरीका (2012)
एल्भीरा सस्त्रले प्रस्तुत गरेको यो पहिलो पुस्तक हो जससँग उनले समकालीन स्प्यानिश कविताहरूको खोजी गरिन। कार्य emotions 43 कविताहरू मिलेर बनेको छ विभिन्न भावनाहरूले भरिएको, जुन धेरैले पहिचान गर्न सक्दछन्। प्रत्येक शब्द साहस, मुक्ति र दमन र असहज को भावना को सामना मा राहत को एक कार्य को प्रतिनिधित्व गर्दछ।
Fort Fort तरिका ...
एल्वीरा सस्त्रेले उनको दोस्रो रचना नविकरणको हावाको साथ कविता पूर्ण संग्रहको माध्यमबाट प्रस्तुत गर्छिन्, जसले प्रत्येक लिखित लाइनमा लेखकको छाप छोड्दछ। अभिव्यक्त कविताले दैनिक जीवनका विषयहरूमा छुन्छ, जस्तै: प्रेम, निराशा, आनन्द, शोक, मित्रता र यौन मामिलाहरू। ताजा र हल्का तर प्रेरणाले भरिएका शब्दहरूको प्रयोगबाट कवि पूर्ण सूक्ष्मतासँग आफूलाई अभिव्यक्त गर्दछन्।
बुलबार्क यो युवा लेखकका लागि सफल भएको छ, यो - अंश - यस तथ्यलाई धन्यबाद गर्दछ कि उनको प्रकाशन घर लेटिन अमेरिकी जनतामा विस्तार गर्न सक्षम भयो। आफ्नै जन्मभूमिमा अनुरोध गरिएको कविताको स among्ग्रहको बीचमा आफूलाई स्थिति दिएपछि, कामले धेरै अनुयायीहरू अधिग्रहण गर्यो मेक्सिको जस्ता देशहरूमा र अर्जेन्टिना
बुलबार्क: संस्करण ...
तपाई बिना दिनहरू (2019)
यस रोमान्टिक कामको साथ, लेखकले उपन्यासको विधामा कडा परिश्रम गरे; यसको रेखा बीच धेरै प्रतिबिम्ब र शिक्षा पूर्ण कहानी देखाउँदछ। कथानकले दुई मुख्य पात्रहरू प्रस्तुत गर्दछ: हजुरआमा र नाति; तिनीहरू दुई पूर्ण भिन्न दृष्टिकोण बाट आफ्नो प्रेमको अनुभव वर्णन।
यो शीर्षक Sastre कमाई २०१२ संक्षिप्त पुस्तकालय पुरस्कार बाट सम्मानित, एक कार्यक्रम जसमा प्रख्यात प्रोफेसरहरूले निर्णायकको रूपमा भाग लिए: अगस्टन फर्नांडीज-मल्लो, रोजा मोन्तेरो र लोला लरुम्बे।
तपाई बिना दिनहरू हजुरआमा (डोरा) र उनको नाति गाल, एक जवान मूर्तिकारको बीचको क्यामेराडी याद गर्दछ। कथानकले दुई परिदृश्य प्रस्तुत गर्दछ। पहिलोमा, डोरा - गणतन्त्रको समयमा एक शिक्षिकाले गाललाई उनको प्रेम कहानी बताउँछिन्। यो अनुभव अत्यधिक संवेदनशील विवरणसहित लोड गरिएको छ, यद्यपि यो धेरै स्पष्टसँग बताइएको छ। ती वृद्ध महिलाले धेरै वर्षको आफ्नो अनुभवको आधारमा त्यस जवान मानिसलाई बहुमूल्य सल्लाह प्रदान गर्दछ, जुन कठिन समयलाई उसले गुजारा गरिरहेको थियो।
दोस्रो चित्रले हामीलाई देखाउँदछ कि गेल हालको ब्रेकअपबाट पीडित छ।। यद्यपि, हजुरआमाबाट आउँदछ कि हरेक बुद्धिमानी शब्दहरूले उसलाई ठूलो शिक्षा छोडदैछ जुन बिस्तारै उसको अवस्थामाथि विजयी हुन मद्दत गर्दछ। यसरी प्रेम र जीवन जत्तिकै गहिरा विषयवस्तुहरूको साथ धेरैले पहिचान गर्न सक्ने महसुस गर्न सक्ने कथानकको विकास गर्दछ।
दिन तपाईं बिना: पुरस्कार ...
खराब कुकुरहरू राम्रो कुकुरहरूमा हुँदैनन् (2019)
यो गतिशील कथा एल्वीरा सस्त्रको पछिल्लो किस्त हो; कार्य सूक्ष्म रूपमा बच्चाहरूको दृष्टान्तको साथ थियो। पुस्तकमा, को कलम युवा लेखक एक अनुभव बताउँछिन् जुन उनको बाल्यकाललाई चिह्नित गरियो र त्यो धेरै प्रियजनसँग गाँसिएको छ: कुकुर। यस गद्य कविताको प्रत्येक प family्क्ति परिवार र प्रियजनको मृत्यु जस्ता अत्यधिक महत्त्वका मुद्दाहरूलाई छुन्छ।
शीर्षकमा, लेखक समाजको एउटा निषेधनमा उनको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दछन्: बच्चाहरूलाई मृत्युको बारेमा कुरा गर्दै। यस सम्बन्धमा, कविले भने: "मृत्युको बारेमा कुरा गर्नबाट जोगिनु मूर्खता हो, ढिलो होस् वा चाँडो तपाईले यसको सामना गर्नुपर्नेछ।"
यस उपन्यासले ट्याangगो नामको कुकुरको कथा बताउँछ। यो खेल detail बर्षेकी केटीले विस्तारै वर्णन गरेको छ, जसले पशुलाई आफ्नो परिवारको हिस्सा मान्दछ। पुस्तकको पृष्ठहरूमा - र प्रत्येक क्षणमा भनिएको - तपाईं तिनीहरू बीचको अनुभवहरूको छविहरू देख्न सक्नुहुन्छ, कुकुरले यस संसार छोड्ने क्षण सहित।
यो पक्कै पनि कसैको लागि गाह्रो परिस्थिति हो। जे होस्, सानो केटीको मीठो र निर्दोष परिप्रेक्ष्यले सबै कुरालाई अधिक पचाउन सक्ने बनाउँदछ, जसले यसो गरेको बालिश्ती बुद्धिको लागि एक ठूलो शिक्षा छोडेर.
राम्रो कुकुर होईन ...
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » कविता » एल्विरा Sastre पुस्तकहरु
सर्वश्रेष्ठ स्पेनिश इतिहास पुस्तकहरू
एस्टेबान नावारो। जासूसी उपन्यासको लेखकसँग अन्तर्वार्ता